Kurapa Tourism Kuratidziro ine mushonga we COVID-19 wakasanganisirwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Kurapa Tourism Kuratidziro ine mushonga we COVID-19 wakasanganisirwa
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Seychelles Nhau • tsika nemagariro • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • LGBTQ • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kumirira vhiki nhatu pakati pekutanga wekudzivirira wechipiri uye wechipiri kupfura kumahombekombe egungwa jecha reSeychelles hainzwike zvakanyanya
Kurapa Tourism ndeye bhizimusi hombe uye rinopihwa kutenderera pasirese. Kubva pamazino anodyara kusvika kumoyo kuisirwa kwekushanya kwekurapa kunofukidza zvese uye munzvimbo zhinji.
Mushonga weCOVID-19 uri kudiwa zvakanyanya pasirese, asi dzimwe nyika dzakagadzirwa kupfuura dzimwe kana kuva nevanhu vashoma.
COVID-19 yekushanya inogona kunge iri inotevera mukana ichibvumira yakawanda kuti iwane mushonga nekukurumidza.
Kuisirwa bvudzi uye kuiswa kwemazino ibhizimusi hombe muTurkey. Coronavirus mapfuti ane zvese zvinoshandiswa kuti uve mukana unowedzera wekushanya, uye vashanyi vekushanya vari kutobuda
Iyo Dubai Mall yakavhurika. Kwevhiki-nhatu dzekutenga zvekutengesa uye rwendo rwekuenda kugungwa kuUnited Emirates uye zvivakwa zvekutanga zvehutano uye mamwe emahotera emhando yepamusoro munyika akagadzirira kukushandira unonzwika unokwezva. Izvi zvinonyatsoitika kana zororo iri rinosanganisira ako maviri COVID-19 mapfuti.
Kumirira vhiki nhatu pakati pekutanga wechipiri uye wechipiri mushonga weCOVID-19 wapfurwa munzvimbo yekumahombekombe yemahombekombe pane chena jecha Indian Ocean pamhenderekedzo yeSeychelles hazvinzwike zvakanyanya kune vazhinji.
Vakafa Ona muIsrael inowanzoonekwa senzvimbo ine hutano pasi pano. Israel irikuita basa rakakura mukuita kuti vagari vayo vabaiwe majekiseni, uye mikana yekushanya yezororo rekudzivirira inogona kunge yave pedyo munguva pfupi.
Zvinoenderana nenhau dzakaburitswa nhasi chiGerman RTL uye Stern Magazini, FIT REISEN, mutariri wechiGerman anoshanya muHamburg arikuronga zororo remhando yepamusoro rinouya nekuwedzera kunoponesa hupenyu: Mushonga weCoronavirus.
Sekureva kweFIT REISEN, yekutanga package ichatengesa EURO 2000- 3000 pamwe nemutengo wemubhadharo wekurapa uye mutengo wejekiseni.
FIT Reisen yakaburitsa chirevo chinotevera:
“Tiri kutambira zvikumbiro zvakawanda kubva kune vatengi vedu zororo rekurapa iro rinogona kuuya nemushonga weCCVID-19. Tiri kutsvaga sarudzo yakadaro zvakanyatsonaka. Isu tiri mukutaurirana nenzvimbo dzakasiyana siyana.
Isu tava kugamuchira kunyoreswa kusingabvumirwe pane yedu webhusaiti www.zvinetse.de/impfreisen , zvakadaro, panguva ino hatina chirongwa chakati kuti titengese. ”
Iyo Yekushanya Operator inotsanangura pane yayo webhusaiti.
Chii chinonzi rwendo rwekudzivirira?
Rwendo rwekubaiwa nhomba ndeye mavhiki matatu kusvika mana evhiki ezvehutano apo vafambi vane mukana wekuronga kushanya kwachiremba vaviri uye kugamuchira mushonga weCoronavirus. Anoshanyira oparesheni anovimbisa emahotera emahombekombe uye kutandara uko muenzi anozopihwa nekuparadzwa neyoga, Ayurveda, uye kukwizwa.
FIT Reisen akawedzera kuti: “Hatisi kuzobvisa mushonga kubva kuvanhu veko. "Tichangopa mapakeji edu kana vazhinji vevagari munyika dzatiri kuenda vabaiwa majekiseni."
Nyanzvi yezveGerman hutano Karl Lauterbach anoona maitiro ebhizinesi akadaro asina hunhu.
Israel ine chirevo chisina kujeka ichiti mukana wakadai haupihwe panguva ino. Israel inoramba yakavharwa nekuda kwekushanya, asi isu tinotarisira kuti maIsrael ese achakwanisa kubaiwa nhomba nekukurumidza.
Sherin Francis, CEO weSychelles Tourism Board akashamisika kunzwa nezve budiriro iyi kubva eTurboNews uye ndanga ndisingazive nezvekurwisa nzira dzakarongwa kuenda kuchitsuwa nyika yake. Akavimbisa kuongorora nekuchengetedza eTurboNews kuziviswa nezve chero shanduko.
Nhengo yebhodhi ye World Tourism Network havana kuda kutumidzwa zita asi vakati: Zvinogona kungori nyaya yenguva. Mari inotaura.
Zvekukuvadza nzvimbo dzekuzadza mahotera emitengo yemitero inokwezva. Kana maindasitiri nevatungamiriri vehurumende vachigona kubvumirana nekutsigira nekuisa zviri pamutemo zviitiko zvakadaro uye mushure mekunge vagari venzvimbo vabaiwa jekiseni, izvi zvinogona kuve mukana nemaropafadzo kune anorwara ekufamba neindasitiri yekushanya mune dzimwe nyika.
Eswatini Ine Runyararo Mushure meHumambo Hwakaitika Mhirizhonga ...